xasan kaahiye – Page 30 – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Aqriso : War Saxaafadeed kasoo baxay Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Dadban ee 2016-ka
Guddiga Federaalka Hirgelinta Doorashooyinka Dadban (GFHDD) ayaa soo saaray War-Saxaafadeed ay uga hadlayaan halka uu marayso Howlaha Doorashooyinka ee Guddigaasi loo Igmaday. Guddiga ayaa sheegay in ay sameenayaan dadaal kasta oo lagu hubinayo in hannaanka geeddi socodka doorashooyinka Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare in ay ku qabsoomaan waqtigii loogu tala galay. Waxa ay Sheegeen Guddiga Doorashooyinka in ay xoogga saarayaan ...
Maxkamada sare ee Soomaaliya oo fursad shaqo soo bandhigtay
Maxkamada sare ee Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxay ogeysiinaysaa bulshada Soomaliyeed inay u baahantahay, hal qof oo noqondoona xiriiriyaha mashruuca LOA. Mashruucan waxaa maalgelin ku samaynaya barnaamijka horumarinta Qaramada Midoobey ee UNDP. Hooska ka akhriso faah-faahin dheeraad ah. TERMS OF REFERENCES for Letter of Agreement (LOA Coordinator) Federal Republic of Somalia Supreme Court TERMS OF REFERENCES for ...
Amar dhabar jab ku ah musharixiinta oo lagu soo rogay garoonka Aadan cadde
September 21, 2016	Leave a comment 39 Views
Warqad ka soo baxday maamulka garoonka diyaardaha muqdisho ayaa lagu amray in Warbaahinta aysan garoonka soo geli karin muddo 60 cisho. Go’aankan oo ka soo baxay Maareeyaha Guud ee Maamulka Amniga Garoonka ayaa ah mid lid ku ah Musharaxiinta dalka imaanaya ee doonaya in taageerayaashooda ku soo dhoweeyaan Garoonka, taasoo ah mid caburin ah iyo in indhaha Warbaahinta laga xiro ...
Sawirro Naxdin leh oo laga soo qaaday qarax khasaare geystay oo ka dhacay Muqdisho
September 21, 2016	Leave a comment 44 Views
Ugu yaraan hal qof, ayaa waxaa la xaqiijiyay in uu ku dhintay qarax gaari oo maanta ka dhacay Magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho. Qaraxan, ayaa waxaa lagu soo xiray gaari ay la socdeen saddex ka mid ah Ciidamada Hay’adda Nabad Suggida Somaliya, iyadoo hal askari uu ku dhintay, halka mid kalana uu ku dhaawacmay. Qaraxan waxaa uu ka dhacay nawaaxiga ...
Doon ay saarnaayeen 600 oo ruux oo ku degtey xeebaha dalka Masar
September 21, 2016	Leave a comment 37 Views
Ugu yaraan 29 ruux ayaa geeriyootay kadib markii doon ay saarnaayeen ay ku degtay xeebaha dalka Masar, iyadoo la la’ yahay inta badan dadkii saarnaa doontan halka tiro dad ah laga soo badbaadiyay. Doontan ayaa la sheegay in ay saarnaayeen lix boqol oo ruux kuwaasoo 150 ka mid ah la soo babaadiyay sida ay warbaahinta dalka Masar ay sheegeen. Wararka ...
Madaxweyne Xasan oo sharci daro ku tilmaamay Heshiiskii dhawaan ay wada gaareen Somaliland iyo shirkad Imaaraad ah..
September 21, 2016	Leave a comment 52 Views
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si adag uga hadlay Heshiis ay wada gaareen Maamulka Somaliland iyo Shirkad laga leeyahay dalka Imaaraatka Carab oo dhawaan lagu wareejiyay maamulka Dekada Berbera. Waxa uu sheegay Madaxweynaha Soomaaliya Heshiiska ay wada gaareen maamulka Somaliland iyo Shirkada DPWorld ee dalka Imaaraadka laga leeyahay uu yahay mid sharci daro ah oo aysan raali ka aheyn ...
Banaan bax looga soo horjeedo muranka Badda oo Muqdisho ka socda
September 21, 2016	Leave a comment 47 Views
Banaan bax ballaaran oo looga soo horjeedo muranka Badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa ka socda Magaalada Muqdisho. Banaan baxan waxaa soo qaban qaabiyay maamulka Gobolka Banaadir, iyadoo boqolaal shacab ay taaganyihiin Fagaaraha Daljirka Dahsoon, halkaas oo masuuliyiinta gobolka banaadir iyo xubno katirsan dowladda wakhtigeedu uu dhamaaaday ay shacabka kula hadlayaan. Khudbada masuuliyiinta ayaa laxiriirta sidii ayey ku sheegayaan ...
Dowladda Britain oo Shirweyne martigelinaysa, xero Milaterina ka samaysanaysa Somaliya iyo waxbadan oo ay ka hadashay Theresa May
Ra’iisul Wasaaraha UK Theresa May ayaa khudbadii u horeysay ka jeediyay Shirka golaha guud ee loo dhan yahay Qaramada Midoobey ee ka socda magaalada New York, iyadoo soo hadal qaaday kaalinta UK kaga jirto Arrimaha siyaasada iyo ammaanka Soomaaliya. Theresa May ayaa sheegtay in Soomaaliya ay taageero la garab taagan yihiin laga soo bilaabo sanadkii 2010 illaa iyo maanta, waxaana ...
Sawirro: Alshabaab oo soo bandhigay qaabkii ay ula wareegeen deeganka Moqokori
September 21, 2016	Leave a comment 46 Views
Al-shabaab ayaa soo bandhigay sawiro ku saabsan qaabkii ay ula wareegeen degaanka Moqokori oo ka tirsan gobolka Hiiraan kadib markii ay halkaas isaga tageen ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowlada oo degaankaas muddo badan ku sugnaa. Sawirro lagu soo bandhigay baraha internetka ee Al-shabaab ayaa waxaa ka muuqanayey qaar ka mid ah dagaalyahanada kooxdaas oo dhexmaraya bartamaha degmadaas, iyagoo saf saf ...
September 21, 2016	Leave a comment 48 Views